Evra: Tagista Vidic Xanuunkeeda Waanu Dareemi Doonaa
HomeWararka MaantaEvra: Tagista Vidic Xanuunkeeda Waanu Dareemi Doonaa
Ciyaaryahanka difaaca kooxda Manchester United, Patrice Evra ayaa dhibaato hor leh oo naadiga la soo daristay ku sifeeyey tagitaanka kabtan Nemanja Vidic uu kooxda kaga dhaqaajinayo kuna biirayo Inter xagaagan.
Warka u wareegista Vidic ee kooxda Talyaaniga ah, ayaa la shaaciyey bishii March, kadib markii ciyaaryahanku diiday inuu heshiiska uu United kula joogo u cusboonaysiiyo, waxaanu intii uu naadiga la joogay la qaaday shan horyaal oo Premier League ah iyo koobkii Champions League ee sanadkii 2008.
Evra, oo si weyn ay u damaqday ku biirista Inter ee ciyaaryahanka Serbian-ka ah, ayaa wakhtigiisii oo dhan kula qaybsaday United laacibka Vidic kadib markii labadooduba isku mar bishii January ee 2006 dii kooxda wada yimaadeen.
“Waa xaalad xanuun kulul waayida Vida,” ayuu laacibka xulka Faransiiska ee Evra u sheegay shabakada Inter net ka ee kooxda Machester United.
“Aniga ahaan, wuxuu ahaa lama loodiye difaaca badhtanka ah (centre-back). Markaad aragto ciyaaryahan sida Vidic oo naadiga ka tagaya, Runtii aad baad uga murugoonaysaa.
“Markaad ka hadlaysaan Vida, waxay la mid tahay idinkoo aniga naftayda ka sheekaynaya. Anagoo wada socona ayaanu hal mar naadiga wada nimid. Waxaan xasuustaa kulankii ugu horeeyay inuu nagu ahaa mid aad xaaladiisu noogu adag tahay, kaydka ayaanu wada fadhinay labadayaduba. Kuwo bah takooran ayaanu noqonay.
“Rene Meulensteen ayaa ahaa tababaraha kooxda kaydka isaganaa labadayadaba dibada na dhigay. Waxaanu ku dhex sheekaysanay qolka lebiska, anagoo leh: ‘Aah, Maxaa na keenayay Manchester? Ma isaga noqona kooxeheenii hore’.
“Waxay ahayd marxalad adag, laakiin labadayaduba waanu la qabsanay markii dambe. Isku huteel ayaa nala dejiyey oonu ka iman jiray garoonka tababarka, waxaanu ku wada guulaysanay, koobab isku mid ah. Aad baan uga murugaysanahay waayidiisa anigu.”